40 Mugore rechimakumi maviri nemashanu rokutapwa kwedu,+ pakutanga kwegore racho, pazuva rechigumi romwedzi wacho, mugore rechigumi nemana pashure pokunge guta raparadzwa,+ pazuva iroro chairo ruoko rwaJehovha rwakava pamusoro pangu,+ akandiendesa kunzvimbo iyoyo.+ 2 Pane zvandakaratidzwa naMwari, akandiendesa kunyika yaIsraeri, akazondigadzika pagomo refu refu,+ paiva nechimwe chinhu chakanga chakaita sechivako cheguta kumaodzanyemba.+ 3 Akandiendesa ipapo, uye tarira! paiva nomumwe murume. Chitarisiko chake chakanga chakaita sechitarisiko chemhangura,+ muruoko rwake makanga muine tambo yomufurakisi, netsanga yokuyeresa,+ uye akanga akamira pagedhi. 4 Murume wacho akatanga kutaura neni achiti: “Mwanakomana womunhu,+ ona nemaziso ako, unzwe nenzeve dzako, uye uise mwoyo wako pane zvose zvandichakuratidza, nokuti waunzwa pano kuti ini ndikuratidze. Udza imba yaIsraeri zvinhu zvose zvauri kuona.”+ 5 Zvino tarira! kwaiva norusvingo rwaiva kunze kweimba rwaiipoteredza yose. Muruoko rwomurume wacho maiva netsanga yokuyeresa yaisvika makubhiti matanhatu, kubhiti rimwe chete rakaenzana nekubhiti rimwe chete noupamhi hwechanza. Akatanga kuyera kufara kwechinhu chacho chakavakwa, chikaita tsanga imwe chete; uye urefu hwacho, hukaita tsanga imwe chete. 6 Zvino akasvika pagedhi rakatarira kumabvazuva,+ akakwira nematanho aro. Akatanga kuyera chikumbaridzo chegedhi racho,+ kufara kwacho kukaita tsanga imwe chete, uye kufara kwechimwe chikumbaridzo chacho kukaita tsanga imwe chete. 7 Imba yomurindi yakanga yakareba tsanga imwe chete uye yakafara tsanga imwe chete, uye pakati pedzimba dzevarindi+ paiva nemakubhiti mashanu; uye chikumbaridzo chegedhi raiva parutivi rwevharanda regedhi raiva nechomukati chaiva tsanga imwe chete. 8 Akayera vharanda regedhi raiva nechomukati rikaita tsanga imwe chete.+ 9 Naizvozvo akayerawo vharanda regedhi, rikaita makubhiti masere; mbiru dzaro dzomumativi dzikaita makubhiti maviri; uye vharanda regedhi racho raiva nechomukati. 10 Dzimba dzevarindi dzegedhi raiva nechokumabvazuva dzaiva nhatu kurutivi rwuno uye nhatu kurutivi urwo. Dzose dziri nhatu dzakanga dzakaenzana uye mbiru dzomumativi dzakanga dzakaenzana, kurutivi rwuno nokurutivi urwo. 11 Akabva ayera kufara kwesuo repagedhi, kukaita makubhiti gumi; kureba kwegedhi racho kukaita makubhiti gumi nematatu. 12 Nharaunda yakanga yakakomberedzwa nekarusvingo yaiva pamberi pedzimba dzevarindi yaiva kubhiti rimwe chete, uye kwaiva nenharaunda yakanga yakakomberedzwa nekarusvingo yaisvika kubhiti rimwe chete kumativi acho ose. Imba yevarindi yaiva makubhiti matanhatu kurutivi rwuno uye makubhiti matanhatu kurutivi urwo. 13 Akayera gedhi kubvira padenga reimba imwe chete yevarindi kusvikira padenga reimwe yacho, zvikaita makubhiti makumi maviri nemashanu pakufara;+ suo rakanga rakatarirana nerimwe suo. 14 Akabva ayera mbiru dzomumativi dzaisvika makubhiti makumi matanhatu, pamwe chete nembiru dzomumativi dzechivanze chaiva mukati memagedhi kumativi ose. 15 Kubva pamberi pegedhi repaipindwa napo kusvikira pamberi pevharanda regedhi romukati paisvika makubhiti makumi mashanu. 16 Paiva nemahwindo aiva nemafuremu aienda achiita maduku+ edzimba dzevarindi neembiru dzadzo dzomumativi akatarira nechomukati megedhi kumativi ose, ndizvo zvakanga zvakaitawo mavharanda acho. Mahwindo acho akanga ari kumativi ose akatarira nechomukati, uye pambiru dzomumativi paiva nemifananidzo yemichindwe.+ 17 Akazondiendesa muchivanze chokunze, uye tarira! maiva nedzimba dzokudyira,+ nenzvimbo yakarongwa matombo yakagadzirirwa chivanze chacho kumativi ose. Panzvimbo yacho yakanga yakarongwa matombo paiva nedzimba dzokudyira makumi matatu.+ 18 Nzvimbo yacho yakanga yakarongwa matombo yaiva kurutivi rwemagedhi yakanga yakanyatsofanana nokureba kwemagedhi—iyo nzvimbo yakarongwa matombo yepasi. 19 Akayera kufara kwacho kubvira pamberi pegedhi repasi kusvikira pamberi pechivanze chomukati. Kunze kwacho kwaisvika makubhiti zana, kumabvazuva nokuchamhembe. 20 Chivanze chokunze chaiva negedhi rakanga rakatarira kuchamhembe. Akayera kureba kwacho nokufara kwacho. 21 Dzimba dzevarindi dzacho dzaiva nhatu kurutivi rwuno uye nhatu kurutivi urwo. Mbiru dzacho dzomumativi nevharanda racho zvakanga zvichienzanirana nokuyerwa kwegedhi rokutanga. Chakanga chakareba makubhiti makumi mashanu, uye chakanga chakafara makubhiti makumi maviri nemashanu. 22 Mahwindo acho nevharanda racho nemifananidzo yacho yemichindwe+ zvakanga zvakaenzana nezvegedhi rakatarira kumabvazuva. Vanhu vaikwira vachipinda machiri vachishandisa matanho manomwe, uye vharanda racho raiva kumberi kwawo. 23 Gedhi rechivanze chomukati rakanga rakatarirana negedhi raiva kuchamhembe; uye nerimwe raiva kumabvazuva. Akayera kubvira pagedhi kusvikira pane rimwe gedhi pakaita makubhiti zana. 24 Akazondiendesa kumaodzanyemba, uye tarira! paiva negedhi raiva kumaodzanyemba,+ akayera mbiru dzaro dzomumativi nevharanda raro nezviyero zvakafanana neizvi. 25 Iro nevharanda raro zvaiva nemahwindo kumativi ose, akafanana nemahwindo aya. Rakanga rakareba makubhiti makumi mashanu, uye rakafara makubhiti makumi maviri nemashanu. 26 Paiva nematanho manomwe okukwira nawo kwariri,+ uye vharanda raro raiva kumberi kwawo. Raiva nemifananidzo yemichindwe, mumwe chete kurutivi rwuno uye mumwe chete kurutivi urwo pambiru dzaro dzomumativi. 27 Chivanze chomukati chaiva negedhi nechokumaodzanyemba. Akayera kubvira pagedhi kusvikira pane rimwe gedhi nechokumaodzanyemba zvikaita makubhiti zana. 28 Akazondipinza muchivanze chomukati nepagedhi rokumaodzanyemba. Akayera gedhi rokumaodzanyemba nezviyero zvakafanana neizvi. 29 Dzimba dzevarindi dzechivanze chacho nembiru dzacho dzomumativi nevharanda racho zvakanga zvakaenzana neizvi. Icho nevharanda racho zvaiva nemahwindo kumativi ose. Chakanga chakareba makubhiti makumi mashanu, uye chakanga chakafara makubhiti makumi maviri nemashanu.+ 30 Kumativi ose kwaiva nemavharanda; akanga akareba makubhiti makumi maviri nemashanu, uye akanga akafara makubhiti mashanu. 31 Vharanda racho raiva kuchivanze chokunze, mifananidzo yemichindwe yaiva pambiru dzacho dzomumativi,+ uye pokukwira napo pacho paiva nematanho masere.+ 32 Akazondipinza muchivanze chomukati nenzira yokumabvazuva, akayera gedhi nezviyero zvakafanana neizvi. 33 Dzimba dzevarindi dzacho nembiru dzacho dzomumativi nevharanda racho zvakanga zvakaenzana neizvi, uye icho nevharanda racho zvaiva nemahwindo kumativi ose. Chakanga chakareba makubhiti makumi mashanu, uye chakanga chakafara makubhiti makumi maviri nemashanu. 34 Vharanda racho raiva nechokuchivanze chokunze, uye mifananidzo yemichindwe yaiva pambiru dzacho dzomumativi kurutivi rwuno nokurutivi urwo. Pokukwira napo pacho paiva nematanho masere. 35 Zvino akandiendesa kugedhi rokuchamhembe,+ akayera, nezviyero zvakafanana neizvi,+ 36 dzimba dzaro dzevarindi, mbiru dzaro dzomumativi nevharanda raro. Raiva nemahwindo kumativi aro ose. Rakanga rakareba makubhiti makumi mashanu, uye rakanga rakafara makubhiti makumi maviri nemashanu. 37 Mbiru dzaro dzomumativi dzaiva kuchivanze chokunze, uye mifananidzo yemichindwe yaiva kurutivi rwuno nokurutivi urwo.+ Pokukwira napo paro paiva nematanho masere. 38 Imba yokudyira nesuo rayo zvakanga zviri pedyo nembiru dzomumativi dzemagedhi. Ipapo ndipo pavaisukira chinopiwa chinopiswa chakakwana.+ 39 Pavharanda regedhi paiva nematafura maviri kurutivi rwuno nematafura maviri kurutivi urwo, okuurayira pamusoro pawo chinopiwa chinopiswa chakakwana+ nechinopiwa chechivi+ nechinopiwa chemhosva.+ 40 Kurutivi rwokunze, kana munhu achikwira kusuo regedhi rokuchamhembe, kwaiva nematafura maviri. Uye kune rumwe rutivi rwevharanda regedhi racho kwaiva nematafura maviri. 41 Kwaiva nematafura mana nechokuno uye matafura mana nechouko parutivi rwegedhi—matafura masere, pavaiurayira. 42 Matafura mana echinopiwa chinopiswa chakakwana aiva ematombo akavezwa. Akanga akareba kubhiti rimwe nehafu, akafara kubhiti rimwe nehafu, uye akakwirira kubhiti rimwe chete. Vaiisawo pamusoro pawo zvokushandisa zvavaiurayisa chinopiwa chinopiswa chakakwana nechibayiro. 43 Huva dzokugadzikira zvinhu dzaiva noupamhi hwechanza, dzakanga dzakanyatsonamatidzwa mukati, kumativi ose; uye vaiisa nyama yechipo chinopiwa+ pamatafura acho. 44 Nechokunze kwegedhi romukati kwaiva nedzimba dzokudyira dzevaimbi,+ muchivanze chomukati, chaiva kurutivi rwegedhi rokuchamhembe. Rutivi rwadzo rwokumberi rwakanga rwakatarira nechokumaodzanyemba. Kwaiva neimwe yaiva kurutivi rwegedhi rokumabvazuva. Kumberi kwacho kwakanga kwakatarira kuchamhembe. 45 Zvino akati kwandiri: “Imba yokudyira iyi, yakatarira kumaodzanyemba ndeyevapristi vanotarisira zvavanosungirwa kuti vaite paimba yacho.+ 46 Imba yokudyira yakatarira kuchamhembe ndeyevapristi vanotarisira zvavanosungirwa kuita paatari.+ Ivo ndivo vanakomana vaZadhoki,+ vanobva kuvanakomana vaRevhi, vanoswedera pedyo naJehovha kuti vamushumire.”+ 47 Zvino akayera chivanze chomukati. Chakanga chakareba makubhiti zana, chakafara makubhiti zana, chiine mativi mana akaenzana. Atari yakanga iri pamberi peimba yacho. 48 Akandipinza muvharanda reimba yacho,+ akayera mbiru imwe neimwe yokurutivi yevharanda racho, dzikaita makubhiti mashanu kurutivi rwuno uye makubhiti mashanu kurutivi urwo. Gedhi racho rakanga rakafara makubhiti matatu kurutivi rwuno uye makubhiti matatu kurutivi urwo. 49 Vharanda racho rakanga rakareba makubhiti makumi maviri, uye rakanga rakafara makubhiti gumi nerimwe chete. Vaikwira kwariri vachishandisa matanho. Pedyo nematanda omumativi paiva nembiru, imwe nechokuno uye imwe nechokoko.+